Bacda Bixinta Cuntada ee Khaaska ah Bacaha qaboojiyaha Pizza
Magaca badeecada: bacda gudbinta cuntada
Cabbirka: 18*18*8.5 inch ama Custom
Dhumucdiisuna: 0.15mm warqad tyvek+2mm xumbo aluminium
Magaca: bacda gaarsiinta cuntada/bacda qaboojiyaha pizza
* * Ku habee LOGO baakadka pizza.
* * Biyo-xireenka sare ee 1680D polyester-ka iyo dharka nylon Oxford ayaa bacda sii hayn kara.
* * Daboolka leh daaqadda sumadeeyaha, wuxuu gelin karaa LOGO, menu, macluumaadka macmiilka iyo walxaha kale ee yaryar.
* * Biraha birta ayaa sii deyn doonta uumi badan si ay u ilaaliso tayada cuntada, iyo inay bacda ka ilaaliso urta biyaha ama ur kasta oo xun.
* * Qalabka bacda ka baxsan waa biyo -la'aan, waxaa loo adeegsan karaa roobka, barafka, iwm.
* * Waa badeecad cagaar ah oo leh ilaalin deegaan, dib -u -adeegsi side gaarsiin kara cabitaannada.
Awoodda Weyn ee dahaaran Bacaha Bixinta Cuntada Bixinta Boorsooyinka Boorsada
* * Boorsadan boorsada lagu keeno cuntada waxay leedahay naqshad xirfadeed, way ku habboon tahay inaad keento markaad socoto ama raacdo mooto/baaskiil. Waa biyuhu, xoog iyo awood weyn.
* * 600D qolofka polyester -ka ee bacda gudbinta waa mid dib loo isticmaali karo oo waari kara.
* * Boorsada boorsada lagu keeno waa la laabi karaa, way fududahay in la kaydiyo, hoosta ayaa leh xoojin waxayna leedahay cimri dheeri. Boorsadu waxay u fadhidaa si siman marka raashinka la rarayo, markaa cuntadaadu kuma dhex duuban doonto baabuurka ama jirridda.
Hore: Awoodda Weyn ee dahaaran Bacaha Bixinta Cuntada Bixinta Boorsooyinka Boorsada
Xiga: Kulaylka Dahaarka leh ee Pizza Cuntada Bixinta Qaboojiyaha Pizza
Bacda weyn ee Pizza
Bacaha dahaaran ee Pizza Carrier
Bacaha Gaadiidka Pizza
Courier Custom biyuhu dahaaran Del kulul ...